Thames Town, otu mpempe England ochie na China | Akụkọ Njem
Thames Town, otu mpempe England ochie na China
Mariela Carril | | Shanghai, njem
Ochie Europe ka nwere amara na ebe ọ bụ na ọdịbendị na-ekesa site na mgbasa ozi na-ezo aka na ya, n'otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ, na ya, ọ na-adọta ndị ọbịa si n'akụkụ ụwa ndị ọzọ. Na obodo ọ bụla dị na Europe, anyị na-ahụ ndị njem nleta America, Africa ma ọ bụ Asia.
Onye ọ bụla chọrọ ịma okporo ụzọ Paris, ụlọ ngosi ihe mgbe ochie nke Madrid ma ọ bụ ụlọ mmanya nke England. Nke ukwuu na eNá mba ụfọdụ, e mewo mgbalị iji chegharịa ịma mma Europe kemgbe ụwa. Ọ bụ ihe gbasara Shanghai ebe anyị hụrụ Obodo Thames.
1 Obodo Thames
2 Obodo mmuo nke Thames Town
Mbụ ị ga-ekwu nke ahụ Shanghai bụ otu n'ime obodo ndị kachasị na mba ụwa na China. Ọ dịlarị mgbe niile, ọ bụghị ihe ọhụrụ. Ọ bụkwa otu n’ime obodo ndị nwere ọnụ ọgụgụ mmadụ karịa n ’ụwa, ihe dịka nde mmadụ 24.
Ọ bụ obodo a raara nye maka azụmaahịa ụgbọ mmiri, a na-eme nnukwu azụmaahịa ebe a ebe ọ bụ na Asia batara na Europe ndị ahịa Britain na mba ndị ọzọ Old World biri n'okporo ámá ya.
Thames Town bụ akụkụ ọhụrụ n'ime mpaghara Songjian, ihe dị ka kilomita 30 site na obodo Shanghai. Mpaghara a ọ bụ mpaghara dịpụrụ adịpụ, otu puku afọ, nke a na-ahụta dị ka ebe ọdịbendị mpaghara.
Songjiang na ogbe ndịda Shanghai jikọtara ya na ụzọ ụgbọ oloko, 9. Ihe kachasị ọhụrụ na gburugburu ebe a bụ nke a Obodo obibi aha ya bụ Osimiri Thames. Dị ka aha ya na-egosi ije bụ European o yikwara ka ị na-agagharị na mpaghara London.
Thames Town dị kilomita anọ n'ogologo na ebumnuche ebumnuche ya na owuwu ya bụ ịnabata ọnụ ọgụgụ ndị dị nso na Mahadum Sonjiang dị nso na na-ebugharị ndị mmadụ site na obodo Shanghai. Ọ bụ akụkụ nke nnukwu oru ngo nke gụnyere iwu nke ngụkọta nke obodo itoolu ndị ọhụrụ, ihe niile dị ka "isiokwu" na ụdị Western.
N'ihi ya, ọrụ ahụ gụnyere obodo dị ka German, Dutch ọzọ, Spanish ọzọ, onye Canada ọzọ, onye Italiantali na onye Scandinavia. Companylọ ọrụ dị n'azụ atụmatụ ahụ bụ Atkins na ihe mbụ hụrụ ọkụ ahụ bụ Thames Town. Emechara ọrụ ndị ahụ na 2006.
Thames Town nwere ohere nke otu kilomita kilomita na A haziri ya ka puku mmadụ iri biri na ya. Ọ bụ agbata obi ezinụlọ, nwere ụlọ ahịa ole na ole, zuru ezu iji nye ndị mmadụ na ihe ọ bụla ọzọ, ma nwee ebumnuche nke ịghara iju mmadụ ọ bụla.
Soldlọ na ụlọ a na-ere ngwa ngwa Ọnụ ọnụ mana ọnụ ọgụgụ ka ukwuu ka erere dị ka "ụlọ nke abụọ" yabụ nsonaazụ ozugbo bụ ịrị elu ahịa na nke ahụ ọ dịghị onye ga-ebi ebe ahụ. Obodo mmuo.
Obodo mmuo nke Thames Town
Ikekwe ndị ọchịchị Shanghai echeghị na nke a ga-abụ ọdịnihu nke obodo ọhụrụ ahụ. Ahịa bilitere nke ukwuu n'ihi ngwa ngwa ahịa na n'ikpeazụ ọ dịghị ezinụlọ nkịtị nwere ike ịzụta ebe ahụ ụlọ na ụlọ ndị ahụ tọgbọrọ n'efu.
Ya na onye nwe ya, ma efu. Taa, anyị nwere ike iji Line 9 metro mata ihe efu a mana n'otu oge ahụ ọmarịcha agbata obi. Edepụtala ọtụtụ ụlọ ya n'ụzọ nkịtị na n'okporo ámá ndị dị na London sitekwa n’obodo ndị ọzọ dị na Bekee.
Okporo ámá ndị a rụrụ arụ, ụlọ ndị Europe, nkume, brik na ọ bụghị ntutu nke China ije. Ihe si na ya pụta bụ na ọtụtụ akwụkwọ foto agbamakwụkwọ nwere ya dị ka ebe kachasị amasị ya. Ọ dị ka ọ dị ịtụnanya mana afọ iri na ise ma ọ bụ afọ iri abụọ gara aga ebe a enwere naanị ahịhịa, ugbo na ehi.
Taa, e nwere otu square na a Ihe oyiyi Winston Churchill, Prime Minista bekee nke Agha IIwa nke Abụọ, pubs, ụlọ osisi Tudor na ụfọdụ ndị ọzọ ndị ọzọ ochie. Eziokwu bu na obu ihe mara nma ... dika ihe onodu egwuregwu.
Nye ga-achọ ibi ebe a? Ọfọn, ikekwe ọ naghị adịrị anyị mma nke ukwuu, mana mgbe ịnweghị ego ijide ụgbọelu wee gaa elekere 16 gaa Europe, si China, nke a dị n'akụkụ ma ọ nwere ike ịbụ ihe ịtụnanya.
Karịa ekele onwe onyes enwere ọtụtụ ndị na-atụ ụkpụrụ ụlọ na-eche na ọ wughi nke ọma- Ogologo adighi nma, ejirila okwute mee ihe n'uzo adighi nma. Ọ bụ ihe dị mfe.
Enwere ike ịsị na ihe karịrị ndị bekee ndị mmadụ ihe ndị China ghọtara site na Bekee. N’ụzọ doro anya, ndị China achọghị ịma. Ọ bụ mmadụ ole na ole bi ebe a, ọ bụ ezie na ha na-ekwu na ọ na-eji nwayọ nwayọ na ndụ na ndị nwere ụlọ ha na-amalite inwe mmetụta nke otu obodo.
Ihe ndị ọzọ ndị mmadụ na-abịa ileta: iji see foto, inwe pikinik na n'ámá ha efu, ịga ije na nrọ na ha nọ na England, ọbụlagodi obere oge. Amaghị m ma m ga-ebi ebe a mana ọ bụrụ na enwere m ya nso m ga-aga mkpagharị, ị bụghị?
Isi ihe bụ na ihe ndi China n’abughi nke ohuru. United States, ihe dị ka otu narị afọ gara aga, nwere otu ahụ ma ọ bụrụ na ị mee obere nyocha ị ga-ahụ "obodo ndị mepere emepe" n'ụwa niile. Ndị China bụ ndị ikpeazụ isonye omume a, yabụ.
N'afọ gara aga, ha wuru oyiri nke obodo Austrian mara mma nke ha niile, Hallstatt, saịtị World Heritage site na buut. Ha hụrụ ya n'anya, anyị chere na ọ bụ nkọwa kistch. Somefọdụ n’ime anyị hụkwara ya n’anya.
Eziokwu bụ na mmemme a, "Otu obodo, obodo iteghete" nke anyị kwuru maka ya n'elu, abụghị echiche ọjọọ. Decongesting a megalopolis like Shanghai is ihe ka dị mkpa, ọ bụ ezie na ịIhe oru ngo dika nke a adighi ka ndi mmadu nweta ya onye choro i si n’ime obodo mepere emepe.
China meghere ụwa ma ndị China achọpụta ụwa ahụ ma ọ masịrị ha nke ukwuu ọ bụghị naanị na ha nabatara ejiji na omenala kamakwa ọ bụ ụlọ. Ọtụtụ ụlọ akụ na ụba nke China na-ewu ụlọ obibi Beverly Hills, dịka ọmụmaatụ, na ha anaghi adi iota ihere mgbe ha na-a copomi.
Eche m! Ọ bụ ezie na n'akụkụ ụwa a, enwere ihu ọma na ọdịnala ndị China ihe niile dị mma. Ha na-edepụta obere akpa, akpụkpọ ụkwụ Hunter, ekwentị, ma ọ bụ ụlọ. Kedu ihe bụ nsogbu?
N'ezie enwere ndi na-ese ihe na China ndi na-ekwenyeghi na "copycat mania" a, mgbe omenala nile nke China zuru oke ime nke a ... mana ejiji bu ejiji. Onye ghọtara ya, mee ka ọ mata.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Shanghai » Thames Town, otu mpempe England ochie na China
Ebe ezumike kacha mma na Wales